Ukuhlunga kwe-Liquid - Sffiltech
Ikhaya » Imikhiqizo » Ukuhlunga kotshwala
IMF uchungechunge lokuhlunga kwe-MFULU ye-Moduline Bag
Incazelo:I-DKD ingumkhiqizi ohamba phambili wokuzihlanza we-car, unochungechunge oluphelele lwemikhiqizo yokuhlunga yokuzihlanza, uchungechunge oluphindwe kathathu, olusebenza ngezikhathi ezihlukene, ukuhlangana ngokugcwele namakhasimende wezezimboni ahlukahlukene wezidingo zokuzihlunga ezingahlanzeki.
Ukulungisa i-othomathikhi uhlelo lokuzenzakalelayo le-DFM DFG yochungechunge
Incazelo:Uketshezi lugeleza lusuka kokungena, okungaphakathi okungaphakathi okuvumelanayo okuguquguqukayo okungu-100% okunamathiselwe ngaphezu kwento yokuhlunga, uketshezi lugeleza lusuka ngaphakathi kwangaphakathi kwesihlungi luye ngaphandle, futhi ukungcola kuzobanjiswa ngaphakathi kwangaphakathi noketshezi oluphuma endaweni yokuphuma; njengoba isikhathi siqhubeka, ukungcola kukhula kancane kancane, futhi ingcindezi yokuhlukanisa iyakhuphuka, edinga ukuhlanza into yokuhlunga ngokuya ngengcindezi yokuhlukanisa noma njalo.
Incazelo:Izindlu ezigcwele zokuhlunga emuva ze-BCM zilungele ukuhlunga ukugeleza okuphezulu, isivinini esikhulu, ukungcola kwe-fluid kuyizinhlayiyana.
Izindlu zokuhlunga zeCartridge kufanelekile ukufaka ngazo zombili ibhokisi lokuphetha elivulekile kanye nenqola eyodwa evulekile yama-222. I-Hooping eyingqayizivele & amp; design wokuvula esheshayo. Kulula ukuvula, ukuvala, ukusebenzisa nokugcina
Incazelo:Isihlungi se-PP sizwa ukuthi senziwe nge-fiber ye-polypropylene ye-100%, ngemuva kokubhobozwa kwenaliti, okulahliwe noma okupolishiwe okokuzwa kwesihlungi se-polypropylene, lapho-ke umuzwa we-pp uzizwa ungathunyelwa kwizikhwama zokuhlunga ze-pp.
Incazelo:Isihlungi se-pe sizwa ukuthi senziwe nge-100% ye-filament polyester fiber, ngemuva kwenaliti yokubhobozwa, yokushiswa noma yokupholisha okokuqukethwe kwesihlungi se-polyester okuzwakalayo, khona-ke umuzwa we-pe uzizwa ungathunyelwa kwizikhwama zokuhlunga.
Incazelo:1) Izinto: i-100% i-nylon (i-polyester etholakalayo uma kudingeka)
2) Ukuluka: Uluka we-Plain (Weave weave itholakale uma kudingeka)
I-3) Ukubala kwe-Mesh: 4T ~ 140T isisindo / cm (13mesh ~ 355 i-mesh / inch)
4) UMax. ububanzi: 365cm (143 inch)
5) Umbala: omhlophe / ophuzi / omnyama
I-mesh yensimbi engenasici
Incazelo:Ukumelana kwe-Acid, alkali-ukumelana, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukungezwani okuqinile nokusebenza okuhle kwe-abrasion
Isikhwama sokuhlunga indandatho
Incazelo:I-snap ikhala ngezinto ezibonakalayo ze-ss, i-carbon iron nokunye.
Indandatho yes snap ingaba ngama-adaptha kunoma iyiphi indawo yokuhlala kwesihlungi
Isihlungi se-Sffiltech sincoma ngokuqinile ukusetshenziswa kwensimbi yokufaka evumela ukufakwa kwesikhwama sokuhlunga endlini yokuhlunga yesikhwama futhi iqinisekise ukuqondaniswa okuyikho kwesikhwama sokuhlunga ngaphakathi kubhasikidi wokuphumula
Ikhaya Previous 1 2 OlandelayoLast - Total 36 1 uloba page yamanje / obuphelele 2 20 ngekhasi ngalinye